I-Gunpost Suite - ikhaya laseValletta endaweni ethule - I-Airbnb
I-Gunpost Suite - ikhaya laseValletta endaweni ethule
Il-Belt Valletta, i-Malta
Ikhaya elifakwe kahle elinendawo yokungena esezingeni lomgwaqo endaweni ethule yabahamba ngezinyawo futhi ibanga nje ukujikijelwa kwetshe ukusuka ezinqabeni ezinhle lapho ubuka iSliema ngaphesheya kwetheku laseMarsamxett.
Isikhungo sedolobha, izindawo zokudlela, iminyuziyamu, zonke izindawo zokudlela zasebusuku kanye nesikebhe esiya eSliema konke kuhamba imizuzu emi-3 - 5 kuphela. Hlala lapha ukuze uvakashele isikhathi emuva cishe eminyakeni engama-500 kuze kube yilapho i-Valletta yakhiwa, kuyilapho usajabulela zonke izinsiza ongazidinga futhi ongazifuna ngenkathi uvakashele eMalta!
Lesi sikhala esisanda kulungiswa, lesi sikhala sitholakala endaweni ethule evaleleke emigwaqweni eseceleni ye-Valletta, sikunikeza indawo ekahle yokubaleka ngokuthula, kuyilapho usekude nebanga lokuhamba kalula kukho konke ongafuna ukukujabulela kukho konke ukuhlala kwakho. Iqanjwe ngokufanelekile ngokuthi i-Gunpost Suites, ngenxa yendawo yayo ekahle enhloko-dolobha, leli khaya lamaholide lakhiwa amabutho aseBrithani phakathi neMpi Yezwe II, njengendawo yokubuka itheku.
Lapho ungena esikhaleni usuka emnyango wezinga lomgwaqo, kunendiza emfushane enezitebhisi eziyishumi nambili, ikhishi elihlome ngokuphelele kanye nendawo yokuhlala enombhede osofa ababili. Ikhishi libuye libe ne-balcony encane ebheke umhubhe. Igumbi lokulala elibanzi, elikhanyayo nelinomoya elinendlu yokugezela ye-en-suite liphansi ephasishi.
I-St Michael Street, noma i-Triq San Mikiel njengoba yaziwa kanjalo ngesi-Maltese, itholakala phakathi komgwaqo oyingingi we-Valletta kanye no-West Street. I-Valletta iyidolobha elihleliwe laseMalta kuphela, nawo wonke umgwaqo walo owenziwe ngegridi, ngakho-ke kuzoba lula kakhulu ukuthola indlela yakho edolobheni ngaphandle kokucabanga okuningi. I-West Street iyimigwaqo emi-4 nje ehambisana ne-Strait Street, ikhaya lempilo yasebusuku ephithizelayo yase-Valletta kanye namanye ama-cocktail nama-whisky ahamba phambili ase-Malta. Omunye umgwaqo obheke enkabeni yiRepublic Street, umgwaqo omude kunawo wonke enhlokodolobha osuka eCity Gate uya eFort St Elmo. KuRepublic Street, uzothola inqwaba yezindawo zokudlela nezitolo, kodwa futhi neGrandmasters Palace ebabazekayo (phezulu ohlwini lwakho ongayivakashela) kanye nendlu yephalamende yaseMalta ngemva kweSango Ledolobha. Ngizofaka inombolo yezindawo engizikhonzile encwadini yomhlahlandlela.
Lesi sakhiwo sinikezwe ilayisense yiMalta Tourism Authority
Imigwaqo yase-Valletta ithulile futhi ngenkathi eminye ivulekele izimoto, kulula ukuhamba kuyo ngenkathi uzula edolobheni. Inamagquma futhi igandayiwe, ngakho-ke ngiphakamisa ukuthi ugqoke izicathulo ezikhululekile. Madoda, kufanele ugweme izicathulo ze-stiletto. Ihlobo lase-Malta livame ukushisa kakhulu futhi linomswakama, ngakho-ke ungakubukeli phansi amandla okushisa kanye nemisebe ye-UV.
Ngizotholakala nganoma imiphi imibuzo ongase ube nayo ngesikhathi sokuhlala kwakho kanye nakuwo wonke amaholidi akho eMalta. Ngizokunikeza iziphakamiso ezimbalwa bese ngikushiyela yona uma ufisa ezinye izincomo ngokwezidingo zakho ezithile.
Hlola ezinye izinketho ezise- Il-Belt Valletta namaphethelo